1,500 Qoraal! U Gudbinta Xukunka Warbaahinta Bulshada! | Martech Zone
Waxaan isticmaali jiray Mashiinka Qalabka Qalabka Internetka caawa si aan isugu dayo inaan tilmaamo markaan rasmi ah bilaabay blog. Waxaan ahaa bloomer soo daahay markii la barbardhigo kuwa wax qora oo bilaabay qorista markii wali la wacay journaling.
Booggeygii ugu horreeyay ayaa ka dhacay Ryze oo ay la socdaan kooxda Suuqgeynta Wargeysyada Wargeysyada (Ma hubo in Ryze uu cusbooneysiiyay illaa 2005!). Ka dib waan u dhaqaaqay Blogger oo bilaabay qorista Doug's Rant.
The boostada ugu horeysa ee blogga ee kujiro WordPress blog wuxuu ku saabsanaa Buugga 'Mountain sayaxa' laftiisa xayeysiinta sida quraacda ii soo qaado Xayeysiintaasi waa inay ku dhiirrigelisaa qof walba inuu bilaabo bog!
Markaan dib u jaleeco dadyowgii wax u qorayay sidoo ka badan a toban sano, waa wax la yaab leh in aan ku soo qaatay stats-ka aan ku leeyahay bartan cimrigiisa gaaban:
Martech Zone wuxuu si isdaba joog ah ugu jiray 5,000 oo blogs on Technorati.
Martech Zone wuxuu ahaa Awood 150 loogu talagalay Blogs Suuq geynta websaydhka.
Martech Zone wuxuu sii wadaa inuu kujiro 100,000 ee boggaga ugu sareeya halkii Alexa.
In kabadan 400,000 oo qof ayaa booqday balooggeyga.
In ka badan 40% ee booqdayaashayda cusub halkan ayey ka yimaadaan Google.
Waxaan sii wadi doonaa wacyigelinta dadka sida loo otomatigyeeyo, la isugu dhafo, ugana faa iideysto tiknoolajiyadooda suuq geynta ugu yaraan dadaal.
Tags: qaylada dougimisa qoraal oo blog ahsaamaynta iyo otomaatigaxukunka warbaahinta bulshadamashiinka dib u celinta
Tilmaanta Tixraaca Suuqgeynta Emailka ee 2009